Khilaafka Dawladda TFG - BBC News Somali
Khilaafka Dawladda TFG
14 Sebtembar 2010
Image caption Ra'iisal-wasaare Omar Abdirashiid
Dawladda raiisal-wasaare Abdirashid Ali Sharmarke ayaa la filyaa in maanta cod kalsooni ah looga qaado baarlmaanka Somalia, sida uu magaalaa Muqdisho ka sheegay shir jaraa'id oo uu shalay gellinkii danbe qabtay ra'iisal-wasaare xigeenka, Sheikh Adan Mohamed Nur
Codkani waxa uu ku soo hagaagayaa xilli uu dalka debadda uga maqan yahay ra'iisal-wasaarihii oo haatan ku sugan magaalada Nairobi, iyada oo dhinaca kalena toddobaadyadani ay muuqatey inuu cirka isku sii shareeray khilaafkii u dhaxeeyey Madaxweyne Sh Shariif Sh Ahmed iyo ra'iisal-wasaarihiisa.
Arrintani waa arrin runtii aad u fool xun, caqabadna ku noqonaysa in waddankan siyaasaddiisii ay ka baxdo xaaladdan ku-meel-gaadhka ah
Ra'iisal wasaare Omar Abdirashiid Sharmarke
Ra'iisal-wasaare Omar Abdiashiid oo u warramay BBC, waxa uu sheegay in uu arrintani u arko tallaabooyin lagu carqaladaynayo dawladda, salkana ku haysa khilaaf siyaasadeed ee haatan taagan. Waxanu ku tilmaamay arrin la yaab leh in isaga oo dalka ka maqan, horena u sheegay in uu imanayo oo jawaab ka bixin doono codsigan baarlamaanka, in haddana ay muuqato in lala sugi waayey. Waxanu intaasi ku daray in qodobkan mooshinkan uu ku saabsan yahay, inuu hore uga jawaabay oo uu baarlamaanka kala hadlay, sharci-hoosaadka baarlamaankuna in uu farayo in aan isla mooshinkii la soo celin karin muddo 6 bilood ah gudahood. Sidaas awgeedna, waxa uu ku gacansaydhay codsigani haatan ee baarlamaanka.
Image caption Sh Adan Madoobe
Sh Adan Madoobe, oo hadda sii ah ku simaha ra'iisal-wasaaraha, waxa uu ka sheegay shirkii jaraa'id ee shalay in baarlamaanku u yeedhay dawladda, si loogu qaado cod kalsooni ah, sidaa awgeedna ay hor tegi doonaan maanta oo Salaaso ah. Waxau intaasi ku daray in codsiga baarlamaanku uu soo gudbiyey ay u hoggaansami doonaan, sida sharicgu u yahay, iyo inuu arrintaasi hore ula socodsiiyey ra'iisal-wasaaraha, una gudbiyey dhawaan qoraalladii codsiga baarlamaanka.
Image caption UN envoy Augustine Mahiga
Kuwa faa'iidada ugu badan ka helaya kala qaybsanaantani waa kooxaha xagjirka ah ee ugu jira dagaalka sidii ay u qabsan laaayeen hoggaanka dalka
UN envoy Augustine Mahiga
Dhinaca kale, waxa iyaguna baaq wadajir ah soo saaray xafiiska UN qaabilsan Somalia, ururrada IGADD, EU iyo AMISOM, baaqaasi oo ay kaga digayaan khilaafyada haatan ka dhex taagan hoggaanka sare ee TFG, kuna tilmaamay khilaafkani mid aan waxtar ahayn xilligani, keeni karana dhaawac weyn. Odhaahdani waxa kale oo ay ka danbaysay dhawaan wafdi ka socda ururradaasi oo booqasho ku tegey magaalada Muqdishu, lana yeesheen madaxweyne Sh Shariif Sh Ahmed wadahadallo u saabsan khilaafyadan.
War-murtiyeedkani ka soo baxay xafiisyadaasi waxa uu ugu baaqay hoggaanka dawladda TFG inay mujiyaan midnnimo wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka haatan taagan ee xagga nabadgelyada iyo waajibaadkii dawliga ahaa, xilliani ku-meel-gaadhka ah ee muddo sanad ah oo keli ahi ay ka hadhay. Waxayna xasuusisay madaxda Somalia in xilligani oo ciidamada nabad-ilaalinta ee AMISOM ay naftooda khatarnna u gelinayaan maalin kasta, daafacaadda dawladda iyo deganaanshaha, in hoggaamiyayaasha Somalida iyagana looga baahan yahay midnnimo iyo wada shaqa adag.
Bishii May ee aynnu soo dhaafnay ayaa madaxweynuhu waxa u ku dhawaaqay inuu soo magacaabi doono raiisal-wasaare cusub, sababta oo ah in xilligii xilkaasi uu ka dhamaaday raiisal-wasaaraha haatan Omar Abdirashiid. Xaaladdani waxay ka danbeeyeen kala qaybsanaan soo dhex gashay baarlamaanka, shir-guddoonkii baarlamaanka, iyo dawladda dhexdeeda. Haddana go'aankaasi madaxweynuhu waa kale oo uu dhaliyey muran iyo khilaaf weyn oo siyaaadeed, isaga oo Omar Abdirashiidna uu ku gacansaydhay go'aankaasi madaxweynaha, kuna tilmaamay in aanu sharci ahayn. Dhinaca kalena waxana uu culays weyni ka yimid beesha caalamka iyo dawladaha gobolka, taasi oo kalliftay in madaxweye Sh Shariif uu ka noqdo go'aankiisii hore.
Toddobaadyadii hore ayaa haddana waxa soo ifbaxay khilfaafyo cusub oo la sheegay inay salka ku hayaan dastuurka federaalka ee qabyada ah ee cusub, kaasi oo hore ay u soo diyaariyeen guddi madax bannaan bishuu July dhamaadkeedii. Welise la isla meel dhigin baarlamaanka dhexdiisa iyo in afti loo qaado.
Khilaafyada noocan ahi ma aha wax ku cusub siyaasadaha dawladaha Somalia ee ku-meel-gaadhka ah ilaa 10-kii sannadood ee u danbeeyey, laga soo bilaabo dawladdii Abdulqaasim Salaad iyo raiisal-wasaarihiisii Ali Khaliif Gallayd, Abdillahi Yusuf iyo Ali Geeddi, iyo haddana Abdillahi Yusuf iyo Nuur Cadde